FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA PAPERANIANINA - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika paperanianina
Alika mifangaro mifangaro Papillon / Pomeranian
'Ity no Kaina. Manana hybrid Pom / Papillon iray hafa aho izay vehivavy amboadia amboadia antsoina hoe Sky (hita eo ankavanana amin'ity sary ity sy amin'ny sary etsy ambany). Ny roa amin'ireo alika ireo dia ny endrika mpamorona fantatra amin'ny anarana hoe Paperanian ary alika kely velona izy ireo. Tena mifanerasera izy ireo ary mifanerasera tsara amin'ny alika hafa ary koa ny saka. Ho an'ny alika mijery kely sy marefo toy izany dia tian'izy ireo ny eny ivelany ary hanaraka ahy na aiza na aiza, ary ao anatin'izany ny filomanosana mamakivaky renirano iray amin'ny filàna. Manao biby fiompy tsara indrindra izy ireo satria be fitiavana sy be fitiavana tsy mpanao sambo vaventy raha tsy avelanao hiala amin'izany izy ireo. '
Ny paperanian dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny lolo ary ny Pomeranian . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ho 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Sky the Paperanian (alikaola mifangaro Papillon / Pomeranian)
'Colby Paperanian tamin'ny 8 volana - Pomeranian ny rainy, Papillon ny reniny.'
Ankizy paperiana taranaka voalohany amin'ny taona 3 herinandro izao. Pomeranian 50% izy ary Papillon 50%.
Alika kely paperiana taranaka voalohany amin'ny 3 herinandro (Pomeranian 50% sy Papillon 50%)
Papillon / Pomeranian cross (Paperanian) miaraka amin'ny gitara
'Makanui dia Paperanianana amin'ny 16 volana. Tena mamy sy malefaka izy. Tiany ny milalao alika hafa ary tiany ny olon-dehibe sy ny ankizy. Tiany ny mandeha mitaingina fiara ary mandeha afovoan-tanàna satria sosialy be izy ary mankafy mihaona amin'ny olona rehetra mandehandeha eran'ny tanàna. Mihevitra aho fa i Maka no fifangaroan'ny toetra. Hendry be izy ary nandray baiko haingana be. Mandeha anaty kitapo kely eny ambony fiaramanidina miaraka amiko mivady aho. Tena ao amin'ny fianakavianay izy. '
'Ity dia iray amin'ireo dian'i Maka… mipetraka eo amin'ny farihin'i Fairmont Orchid Hotel any Waikoloa, Hawaii izy. Tianay ny mijanona any mandritra ny fialantsasatra amin'ny faran'ny herinandro satria sariaka biby izy ireo. '
I Maka the Paperanian ity dia alika alika amin'ny 3 volana.
'I Robin ity. Manodidina ny 10 herinandro eo amin'ity sary ity izy. Ny reniny dia Pom ary ny dadany dia Papillon tan / fotsy. Ankizivavy kely feno hafaliana izy, tsy matahotra mihitsy ny mihaona alika lehibe. Miezaka mitsambikina eo an-dohan'izy ireo izy! Tiany koa ny mihaona amin'ny olona vaovao izay ho hitany amin'ny olona mihodina amin'ny vatany iray manontolo. Hendry be izy, ary mora nampiofana hatreto. Hainy koa ny mitsangana sy mandihy. Tsy andriko izay ho hitany rehefa ho antitra izy. '
'Robin, Paperanianako mizaha ny voatavo Halloween voalohany. Efa ho 9 volana izy, ary hitanao fa nihalava kokoa ny volony, fa tsy lava toy ny Papillon. Lava sy mahitsy izy io, ary ny vodin-tongony manana ny volony lava indrindra - mahafatifaty tokoa! Tena feisty izy, tiany ny milalao tag ary manenjika ahy na Pom-Chi Bruce manodidina ny trano. Tsy dia mpandehandeha loatra izy, raha tsy rehefa maheno ny lakolosim-baravarana izy na rehefa mitoloko ireo alika hafa eo amin'ny manodidina dia avy eo ampidiriny am-pelatanany ny valiny roa ho an'ny resaka. Nahafinaritra azy ny nianatra ny fiankinan-dohany hianarany hijanona ho somary sarotra noho izy manana vitsika ao anaty pataloha ary tia mihazakazaka. Izy no alika mamy indrindra, na izany aza, ary hiezaka ny hianika ny sorokao mba hilelaka ny tavanao raha avelanao izy! '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Paperanian
Saripika Paperanian 1
bulldog french mainty feno lehibe
feno sary yorkie poo efa lehibe
amerikana staffordshire terrier miloko manga